Galmada Xilliga Uurka (Jawaabo Muhiim Ah) - Hablaha Media Network
HMN:- Maalmahaan, dadku waxay si ka fudud si kasta oo hore uga hadlaan galmada. Si kasta ha ahaatee, dadku mararka qaarkood way ka weji gabxaan iney ka hadlaan galmada iyo uurka waxaana laga yaabaa iney dhibaato ka qabsato iney su'aalo ku saabsan galmada ula yimaadaan takhtarkooda ama kalkaalisadooda. Sidoo kale, haweenka iyo ragguba inta badan cabsidooda iyo dareemmadooda iyagaa isku qarsada.
Biyahaagu ay soo burqadaan ama galka biyuhu uu dillaaco.
Uu dhiig hoostaada ka imaanayo.
Aad xanuun xagga hoose aad ka dareento.
Uu ilmo galeenku isku soo giigsamayo, isu soo ururayo ama fool waqtigeedii ka horreysa ku qabato